Warbixino – Geelle Magazine
Home » Warbixino
War qoraal ah oo kasoo baxey wasaarada arimaha dibada ee maraykan ayaa lagu sheegay in ay dowlada maraykanka soodhawaynayso sida wadajirka ah ee ay uwada shaqaynayaan dowlada dhexe ee somaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. Wasaaradda arrimaha dibadu waxay tilmaamtay […]
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ka qaybgalay shir ay soo qaban qaabisay Qaramada Midoobay oo lagaga hadlayay Qodobo kala duwan oo kamid ah Geedi socodka dalka iyo caqabadaha taagan. Kulankan oo ku dhacay hab maqal iyo […]
Dowladda Suudaan oo war kasoo saartey biyo xireenka Itoobiya kawado Wabiga Nile.
Suudaan ayaa sheegtay iney aqbaleyn fikirka ay Itoobiya soo jeedisay ee ku saabsan qaabka loo buuxinayo biyaha biyo xireenka lagu muransan yahay ee ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Nile. Ra’isal wasaaraha Suudaan Cabadalla Hamdok ayaa sheegay iney dowladdiisu aqbaleyn fikirka […]
Baarlamanka Jubboland oo meel mariyay Codsi uu usoo gudbiyay Axmed Madoobe.
ahmedzaki Posted On May 3, 2020
Xildhibaanada Baarlamaanka labaad ee dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa manta kismaay ayaa waxa ay kaga hadleen mudo kordhinta soo dhisida golaha xukuumada ee maamulka jubboland taas oo uu codsi usoo gudbiyay madaxwayne Axmed Madoobe, waxaana shir guddoomiyay kulanka Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulkaas […]
Kim Jong Un oo mudo dheer kadib kasoo muuqdey munaasabad ka dhacdey dalkisa.
Warbaahinta dowladda Waqooyiga Kuuriya ayaa warinaysa in Kim Jong Un uu ka soo muuqday xaflad lagu xusayay Maalinta shaqaalaha aduunka ee 1 Maaj. Waxa uuna noqon muuqaalkiisii ​​ugu horreeyay ee madaxwaynaha kuuriyada waqooyi mudo saddex toddobaad gudahood ah ka dib […]
Wasiirki Cadaaladda Tansania oo Geeriyoodey.
Wasiirkii cadaaladda dalka Tansania Augustine Philip Mahiga ayaa ku geeriyoodey wadanka tansania gar ahaana magaalada Dodoma sida ay xaqiijisey madaxtooyada dalkaasi. Augustine Mahiga oo mar soo noqday wakiilka Qaramada Midoobay uqaabilsan somaaliya 2010-2013, sido kale wuxu soo noqdey Wasiirka Arimaha […]